मेरो ग’र्भमा तेरो बच्चा छ भनि झुठोआरोप लगाएपछि भारतीय सेना मिडियामा ! « Bagmati Online
मेरो ग’र्भमा तेरो बच्चा छ भनि झुठोआरोप लगाएपछि भारतीय सेना मिडियामा !
गर्भमा दुई महिनाको बच्चा बोकाएर डेबिट लिम्बु सम्पर्क बिहिन भयो भन्दै एक युवती मिडियामा आएकी थिन। ३ बर्ष को प्रेम समबन्ध लाई शारीरिक सम्बन्ध सम्म पुर्याएको र बच्चा भयो भने पछि डेबिट फरार भएको भन्ने कुरा उक्त युबकले थाहा पाए पछि ति युबक पनि अहिले मिडिया मा आएका छन्। मिडियामा ति युबक ले आफ्नो नाम सुनिल राई भनेका छन् , घर भोजपुर बताएका छन्।
युवती मिडिया मा आए लगत्तै ति युबक पनि २ घण्टा पछि सम्पर्कमा आएका थिए। २ महिनाको गर्भ छ भने पछि ति युबकले म मेरी प्रेमिका लाई स्वीकार गर्छु , म घरमै लगेर जान्छु हामी मिडिया सामु आउदैनौ भनेर मिडिया कर्मी संग कुरा गरेका थिए। घर लागे पछि ति युवतीको गर्भ नभएको र सबै झुटो बोलेको हुनाले अहिले ति युबक मिडियामा आएका छन्।
म एक भारतीय सेना मा कार्यरत छु त्यहाँ हाम्रो नेट चल्दैनथ्यो , हाम्रो सम्पर्क नभएको ६ दिन भएको थियो उसले मेरो पल्टन मा भएको नाम , फोटा सबै सार्बजनिक गरेको रहेछ , मेरो एक जना दाईले यस्तो यस्तो छ , तेरो जागिर जाला स्वीकार गर भने पछि म मेरो जागिर बचाउन को लागि नेपाल आए। युवती ले मैले औषधि खान्छु भनि मैले होइन हस्पिटल जाम चेक गर्न भनेर भन्दा उसले मानेन पछि उसले हैन मेरो पेट मा गर्भ छैन म मेरो घर जान्छु त तेरो घर जा भनि। उसले मलाई तेरो जागिर खाइदिनछु , मलाई जिबन भर पुग्ने पैसा दे , भनेर धेरै धम्काई , मेरो नाम को फेसबुक खोलेर मलाई थर्काउने गर्थी।